Sawirro: Afrika iyo sanadda 2016 - BBC Somali
Sawirada sheekooyinkii ugu waa waynaa Qaarada Afrika sanadka 2016
Image caption Oscar Pistorius ayaa iska bixiyey lugaha macmalka ah ee uu ku socdo wuxuuna u dhaqaaqay qolka dhegeysiga Maxkamaddii ku socotay dalka Koonfur Afrika bishii June.
Lahaanshaha sawirka Italian Navy via AP
Image caption Doon ku degtey badda Mediterranean ee u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga ayaa kaamaro ay wateen ciidamada badu qabatey bishii May iyaga oo badbaaadiyey in ka badan 560 muhaajiriin ah.
Image caption Billo dadib dabayaaqadii August, 20 doonyood oo yar yar oo ka buuxeen dad Soomaali iyo Ereteriyaan ah oo ku jirey nin watey ilmihiisa oo shan jir ahi ayaa laga badbaadiyey Xeebta Liibiya.
Image caption Dibadbaxayaal reer Zimbabwi ah ayaa bishii August ku gubey magaaladda Harare ee caasimadda lacag naqad ah oo duug ah, iyaga oo ka mudaharaadaya lacagta cusub ee la sameeyey oo la rabey in ay caawiso doollarka oo yaraadey.
Image caption Oktoobar ayaa waxa dib isu heley 21 dumar ah iyo gabdhahooda. Waxay ku soo caan baxeen ololahii #BringBackOurGirls, Soo celiya Gabdhahayaga, Gabdhahan waxa ka afduubey dugsiggooda oo ku yaala magaaladda Chibok Malayshiyada Boko Haram bishii Abril sannadkii 2004ta.
Lahaanshaha sawirka Patience Atuhaire
Image caption Dhinacan waddadu waa Yugaandha, dhinacana waa Jamhuuriyada Dimuqraadiga Koongo, Qiimaha Basashu waa isku mid labada dhinacba.
Image caption Lucas Sithole oo u dhasahy Koonfur Afrika ayaa laabta laabta u saarey Ymanitu Silva oo u dhashay Baraasiil kadib markii ay ku tartameen Cayaarta Tennista iyaga oo saran gaadhiga curyaamiinta cayaarihii dadka Naafada ah ee bishii September.
Image caption Isla maalintaas, kooxda kubada koleyga ee Ruwanda ayaa ku heestey heesatii calanka ee wadankooda ka hor intii aanay la cayaarin Shiinaha.
Image caption Markii u horeysey waxa ka qayb galay koox qoxooti ah cayaaraha dadka naafadda ah. Kalabar in ka badan waxay ka yimaadeen Suudaanta Koonfureed, waxa ku jirey orodyahanka Yiech Pur Biel (bidix).
Image caption Koonfurta Suudaan waxay caan ku tahay legdinta, bishii Abril waxa ay markii ugu horreysey qabteen tartankii ugu horreeyey illaa intii dagaalka sokeeye ka dhacay sannadkii 20013-ka.
Image caption Liibiya waxa ka bilaabmey qas tan iyo intii ay Ciidamadda Nato xilka ka tuureen Col. Muammar Gaddafi bishii Oktoobar 2011, tani waxay ay u suurto gelisey kooxda la baxdey Dowladda Islaamka in ay hoy ka dhigteen wadankaas. Dagaallo socdey billo badan ka dib waxa laga saarey magaaladii ay haysteen ee Sirte dabayaaqadii sannadkan.
Image caption Bishii May waxa iskaga hor yimid xaafadda Kibera dibadbaxyo codsanaya in isbedel lagu sameeyo qaabka doorashadda iyo booliis. Caruur ayaa ku dhex milmey dibadbaxaas.
Image caption Dibadbaxyo aan hore loo arag ayaa ka dhacay Zimbabwe sannadkii 2016-ka. Kadib markii la xirey laba qof oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshadda, dibadbaxayaal iy booliis ayaa iskaga hor yimi magaaladda labaad ee ugu weyn ee Bulawayo.
Image caption Ganacsatada Waratada ayaa dibadbaxay, booliiskuna waxay kaga jawaabeen waxyaabaha dadka ka ilmeysiiya., dad ayaa isku dayeya in ay ilmahan ka masaxaan indhihiisa gaastii.
Image caption Daadad waaweyn oo ka rogmadey Beledweyne, oo waqooyi ka xigta Caasimada Muqdisho ayey dad badani ka qaxeen guiryahoodii bishii May.
Image caption Billo ka dibn bishii October, gaarigan ayaa sawir looga qaaday isagoo ku jeedda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Image caption Bishii Abril, gabadh yar ayaa lagu dul arkey iyada oo fuushan geesaska dibi xero lo'ada lagu dhaqo Koonfurta Suudaan.
Image caption In October, Askari ka tirsan Suudaanta Koonfureed ayaa geeska saca Hoon ka dhigaya iyadoo lagu jiro hawlgal ciidan.
Image caption Faanta maroodiyada 6,700 ayaa lagu gubey Beerta Xayawaanka ee Nairobi Kiiniya, iyada oo lagu muujinayo sidda sidda ay wadanka uga go'an tahay in la badbaadiyo maroodiyada.
Image caption In kabadan 100 tan geeska maroodiga ayaa la gubey, maalmo ayey gubanayeen
Image caption Waa Xarun kale oo lagu sameeyo baadhitaan Kiiniya, Mpala waxa lagu hayaa maroodigan wuxuu hawada u sayriyey dhoobo kaamirada ayaa qabatay.
Image caption Farshaxanka Faransiiska Tuunisiyaanka ah ee El Seed ayaa ku sawirey muuqaalkan guryaha gidaarada xaafadaha faqiirka ah ee caasimada Qaahira
Image caption Dhinaca kale qaarada, Accra, Ghana, wax ka socda Bandhiga Farshaxanimada Wadooyinka ee Chale Wote
Image caption Bishii November waxa qaaradda mashquuliyey doorashaddii Mareykanka, waxaa ka mid ahaa kooxdan Masaayda ah oo natiijada ka dhageysanaya Raadiye magaaladda Saikeri ee Kiiniya
Image caption Oktoobar waxa la bilaabey khadka tareenka ku shaqeeya korontada ee Ethiopia & Djibouti, socdaalkii qaadan jirey saddexda maalmood ayaa qaadanaya 12 saacadood.
Image caption Shaqaalaha badankoodu waa Shiineys
Image caption Madaxweynaha Zimbabwe President Robert ayaa bishii Febraayo ugu dabaal degay doorshe weyn dhalashadiisii 92aad.
Image caption Magaaladda Knysna ee Koonfur Afrika, nin Rastafarian ah ayaa u ogolaadey sawir qaade in uu duubo isaga oo u dabaal degaya diintiisa oo ay ku jirto isaga oo tuunbo ka cabaya xashiishad.
Image caption Mudaharaadyo ka dhashay shaqo la'aanta ka taagan Tunisa, Nin shaqo la'aan ah ayaa iska xiray bushimaha taasi oo qayb ka ah cunto ka soomid bishii January.
Image caption Xisbiga ugu wayn mucaaradka New Patriotic Party ayaa ku guulaystay doorashooyinkii madaxwweyne ee bishii December.
Image caption Taageerayaasha ayaa aamaanay Halyeeyga kubada cagta Nigeria Stephen Keshi magaalada Lome ee caasimadda wadanka Togo ayaa lagu qabtay kulan loogu baroordiiqayo bishii June.
Image caption Koonfur Afrika waxaa soo maray sanad dibadbaxyo ay dhigeen ardeyda oo ka cabanaya qiimaha waxbarashada.
Image caption Mid ka mid ah taageereyaasha ururka mucaaradka Kenya ee Orange Democratic Movement ayaa sawir maaskaro ah wajiga ku xirtay dibadbax ka dhacay magaaladda caasimadda ah ee Nairobi bishii June.
Image caption Buundo tareenadda ku socdaan oo ku taal wabiga Nzi ee ka soo bilowda Ivory Coast kuna dhamaada Burkina Faso ayaa burburtay, sida sawirkan la qaaday September uu muujinayo.
Image caption Dadaaladda lagu doonayo in lagu dhimo faquuqa ay la kulmaan dadka korka cad cad ee loo yaqaan albinism, bandhigga mudane iyo marwo ee dadka lbinism ayaa lagu qabtay bishii October magaalada Nairobi.
Image caption Ugu dambayntiina, mootoda maraysa magaalada Kinshasa, ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, ayaa fariintan "loba biloba in boyi", oo ah luuqadda Lingala oo macno ah "Dadka afaarahooda ka bax".